Wararka - Qalabka Sifee xaarka ah ee warqadda lagu nadiifiyo ayaa mabda'a qalabka
Qalabka wax lagu nadiifiyo ee waraaqda ah ayaa mabda'a qalabka u adeegsada
Xuddunta Vortex slagger waxaa la sameeyay 1891, laakiin waxaa markii ugu horreysay loo adeegsaday warshadaha waraaqaha 1906.
Waqtigaas, xajmiga xajmiga ayaa loo isticmaalay oo kaliya in looga saaro wasakhda culus ka soo baxa siligga.
Jidhka ugu muhiimsan ee baabi'iyaha slag waa dhululubo, oo aan loo rogin koonto ilaa illaa 1950s, waxaana si ballaaran loogu isticmaali jiray warshadaha waraaqaha.
Ma ahayn ilaa horaantii 1960s in vortex desander si ballaaran looga adeegsado Shiinaha.
Laga soo bilaabo 1970-yadii, kororka degdega ah ee isticmaalka waraaqda qashinka dib loo warshadeeyay, alaabada ceyriinka ah ee fiber-ka labaad, nooca iyo xaddiga wasakhda ku jirta silsiladda fiber-ka ayaa aad u kordhay.
Baahida loo qabo isdaahirinta saxarka, hormarinta slag saaristu waa mid aad u dhakhso badan, waxaa jiray noocyo iyo noocyo kaladuwan oo ah tirtirida wasakhda qashinka, sida waxyaalaha wasakhda badan ee kujira soosaaraha, wasakhda fudud ee kujirta slag iyo wax soo saar taxane ah oo alaab taxane ah.
Wasakhda culus ee loo yaqaan 'slagger slagger' waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro wasakhda ku jirta saxarka oo leh cufnaan ka sarreysa fiber-ka. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira waxyaabo badan oo wasakhda ah wasakhda alaabada taxanaha ah oo ka sameysan noocyo kala duwan, dhexroor, dhererka jirka iyo waxyaabaha ugu muhiimsan.
Si loo yareeyo luminta fiber-ka, keydka saxarka ama xarun dib-u-warshadaynta fiber oo leh qaabeyn gaar ah. Si loo badbaadiyo tamarta, waxaa la soo saaray slagger wasakh ah oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah.
Nadiifinta nalka wasakhda iftiinka slagger nalka wasakhda nuuradu waa nooc ka mid ah slagger kaas oo si gaar ah loogu talagalay in laga saaro wasakhda ka yar saamiga fiber ee saxarka. Waxay leedahay ahmiyad weyn in la nadiifiyo saxarka xaashida qashinka.
Sababta oo ah culeyska gaarka ah ee wasakhda culus iyo wasakhda iftiinka ayaa ka duwan tan fiber, jihada socodka qulqulka qulqulka wanaagsan iyo qulqulka qulqulka qulqulka ka dib kala-goynta sidoo kale way ku kala duwan tahay masaxayaasha slag-ga.
Sidaa darteed, qaab dhismeedka baabi'iyaha slag si looga saaro labada waa ka duwan yahay. Xitaa qaabdhismeedka wasakhda iftiinka qaar ayaa aad u dhib badan, iyo xuduudaha farsamo ee ugu muhiimsan sidoo kale way ka duwan yihiin.
Qalabka nadiifinta saxarada iyo qalabka slagging loo isticmaalo warshadaha waraaqaha.
Qaabku waa shaar leh xagal xagal leh oo qiyaastii ah 8 ~ 13 darajo. Waxay ka samaysan tahay bir bir ah, caag adag ama bir bir ah oo lagu dhejiyay lakabka caaga ah ee polyetylen.
Darbiga gudihiisa waa mid siman oo nadiif ah, xirxira u adkaysta, cadaadis u adkaysta, daxalka u adkaysta, oo aan hoos u dhigin heerkulka 40 ~ 60 ℃.
Dhaqdhaqaaqa Eddy ayaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro wasakhda culus. Waxtarka ka soo bixida slag-ga ayaa ka sarreeya kan hadda eddy slaver remover, kaas oo si weyn u yarayn kara heerka boorka ee saxarka.
Waxayna noqon kartaa xirmooyin ama safaf is barbar socda, dabada ayaa lagu dooran karaa qeybaha, si loo yareeyo qasaaraha saxarka.